E-mail: drchochomyint@daweiuniversity.edu.mm, myintchocho741@gmail.com
၂၀၀၄- ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ပါရဂူဘွဲ့
၁၉၈၂- ဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ၁၉၈၃- ဝိဇ္ဇာ(ဂုဏ်ထူး)၊ ၁၉၈၉- မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်။
၂၀၀၅- ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုပညာဒီပလိုမာ(DTSM)
၂၀-၁၁-၂၀၁၇ မှ ယနေ့အထိ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်၊ ထားဝယ်တက္ကသိုလ်။
၁-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၁၇-၁၁-၂၀၁၇ အထိ ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာဌာန၊ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်။
၁၇-၇-၂၀၀၇ မှ ၃၀-၁၁-၂၀၁၆ အထိ ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာဌာန၊ မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်။
၂၇-၉-၂၀၀၅ မှ ၁၆-၇-၂၀၀၇ အထိ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်။
၃-၇-၂၀၀၀ မှ ၂၆-၉-၂၀၀၅ အထိ ကထိက၊ မြန်မာစာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်။
၁၄-၉-၁၉၉၉ မှ ၃၀-၆-၂၀၀၀ အထိ ကထိက၊ မြန်မာစာဌာန၊ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်။
၁၁-၆-၁၉၉၈ မှ ၁၃-၉-၁၉၉၉ အထိ လ/ထကထိက၊ မြန်မာစာဌာန၊ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်။
၅-၈-၁၉၉၄ မှ ၁၀-၆-၁၉၉၈ အထိ လ/ထကထိက၊ မြန်မာစာဌာန၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်။
၂၂-၁၁-၁၉၉၃ မှ ၄-၈-၁၉၉၄ အထိ နည်းပြ၊ မြန်မာစာဌာန၊ ဒဂုံတက္ကသိုလ်။
၁၄-၁၀-၁၉၉၁ မှ ၁၇-၁၁-၁၉၉၃ အထိ နည်းပြ၊ မြန်မာစာဌာန၊ မြစ်ကြီးနားဒီဂရီကောလိပ်။
၁-၁၁-၁၉၈၆ မှ ၈-၁၀-၁၉၉၁ အထိ နည်းပြ၊ မြန်မာစာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်။
A Study of the Verbal Description of the Duck poem by Zawgyi, Universities Research Journal, Dec,2009, Vol.2. No.7, Page 107-111
A Study on Suffix ‘Tar’ in Myanmar Language, Universities Research Journal, Dec, 2012, Vol.5. No.7, Page 9-15
ရှေးကဗျာများ၏ကဗျာဖွဲ့စည်းမှု, M.A.A.S, June, 2006, Vol.Iv.No.7, Page 15-38
‌ဒေ၀ကုမ္ဘန်ပြဇာတ်ဖြစ်စဉ်ခင်းကျင်းမှုကို လေ့လာခြင်း, M.A.A.S, July, 2007, Vol.V. No6A, Page 147-170
ဣန္ဒာဝံသနန်းတွင်းဇာတ်တော်ကြီး၏ အခင်းအကျင်း, M.A.A.S, June,2008, Vol.VI. No6A, Page 61-78
ကိုးခန်းပျို့မှ အသံသရုပ်ဖော်မှု လေ့လာချက်, M.A.A.S, June, 2010, Vol.VIII. No7A, Page 297-310.
‌ခေတ်သစ်ဆန်းပြီပြဇာတ် အခင်းအကျင်း, M.A.A.S, March, 2012, Vol.X, No.7, Page 257-274
ခလောက်နို့ ပုံပြင်များ၏ ဟာသအမြင်များ, M.A.A.S, June, 2016, Vol. XIV,No.6, Page 381-396.
လုပ်ငန်းသုံးမြန်မာစာ (၂၀၀၃-၂၀၀၆)၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်။
ရှေးပြဇာတ်များ၏ ဖြစ်စဉ်ခင်းကျင်းမှုကို လေ့လာခြင်း (၂၀၀၅-၂၀၀၆)၊ တွဲဖက်ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာ၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်။
သရဘင်္ဂဇာတ်တော်စကား‌ပြေရေးဟန်လေ့လာချက်(၂၀၀၇)၊ ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာ၊ မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်။
ကိုးခန်းပျို့မှ အသံသရုပ်ဖော်မှုလေ့လာချက် (၂၀၀၈)၊ ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာ၊ မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်။
ခေတ်သစ်ဆန်းပြီပြဇာတ် အခင်းအကျင်းလေ့လာချက် (၂၀၀၉)၊ ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာ၊ မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်။
တာ နောက်ဆက်လေ့လာချက် (၂၀၁၀-၂၀၁၃)၊ ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာ၊ မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်။
မြန်မာစာပေလာပုံပြင်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ (၂၀၁၂-၂၀၁၃)၊ ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာ၊ မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်။
ခလောက်နို့ပုံပြင်များလာ အတွေးအမြင်များလေ့လာချက် (ကရင်ပုံပြင်) (၂၀၁၃-၂၀၁၄) ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာ၊ မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်။
ကဗျာဖွဲ့စည်းမှုလာ အဆက်အစပ်ကဏ္ဍလေ့လာချက်(၂၀၁၅-၂၀၁၆) ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာ၊ မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်။
တင်တင့်ပြဇာတ်များ အခင်းအကျင်းလေ့လာချက် (၂၀၁၆-၂၀၁၇)၊ ပါမောက္ခ(ဌာနမှူး)၊ မြန်မာစာ၊ မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်။
လုပ်ငန်းသုံးမြန်မာစာ- မ-၁၀၀၂၊ ပထမနှစ်၊ မြန်မာစာ- ကထိက၊ မြန်မာစာဌာန၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်။
မြန်မာရိုးရာပုံပြင်များ- Text and Study Guide- ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာဌာန၊ မန္တလေးအဝေးသင်တက္ကသိုလ်။
၁၉-၅-၂၀၁၃ မှ ၁၄-၆-၂၀၁၃ အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Mae Fah Laung University တွင် Tourism Management Intensive Course တက်ရောက်ခြင်း။
၁၃-၅-၂၀၁၅ မှ ၁၇-၅-၂၀၁၅ အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Mae Fah Laung University သို့ Excursion သွားခြင်း။
၂၃-၇-၂၀၁၅ မှ ၂၄-၇-၂၀၁၅ အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Mae Fah Laung University တွင် Symposium တက်ရောက်ခြင်း။
၁၇-၄-၂၀၁၇ မှ ၂၁-၄-၂၀၁၇ အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ Chaing Mai University သို့ Excursion သွားခြင်း။
၃၀-၁၁-၂၀၁၈ မှ ၃-၁၂-၂၀၁၈ အထိ ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ Kanchanaburi Rajabhat University တွင် MoU အတွက် Pre-Discussion တက်ရောက်ခြင်း။
၁-၁၁-၂၀၁၉ မှ ၂၃-၁၁-၂၀၁၉ အထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီမြို့ရှိ National Institute of Educational Planning & Administration (NIEPA) တွင် INTERNATIONAL PROGRAMME IN EDUCATIONAL MANGEMENT FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATIORS FROM MYANMAR တက်ရောက်ခြင်း။
(၃) အခြားပြည်ပ/ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှစ၍ Focal Leads, TIDE Project
၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှစ၍ Focal Leads, Change Management
၂၀၁၈ ခုနှစ်မှစ၍ Focal Leads, Quality Assurance Unit
(၈-၆-၂၀၁၈ မှ ၅-၁၁-၂၀၁၉ )ရက်နေ့တွင် ရေအခက်အခဲရှိသော ထားဝယ်တက္ကသိုလ်အတွက် Gravity water flow system ဖြင့် စိမ့်စမ်းရေသွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းအား စတင်ရှာဖွေခဲ့ပြီး အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ထားဝယ်တက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေသော ကျောင်းသား/သူများကို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နှင့် ချိတ်ဆက်မိစေရန် ရည်ရွယ်၍ Eco-tourism နှင့် ထိုင်းဘာသာစကား လက်မှတ်ရ သင်တန်းတိုများကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စ၍ စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
(၃၀-၁၁-၂၀၁၈ မှ ၃-၁၂-၂၀၁၈)ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်တက္ကသိုလ် နှင့် Kanchanaburi Rajabhat University အကြားနားလည်မှု စာချွန်လွှာရေးထိုးနိုင်ရန်အတွက် MoU Pre-discussion meeting ကို ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တက်ရောက်ခဲ့သည်။
စက်တင်ဘာလ၊ ၂၀၁၈ တွင် Smoke Free University ထူထောင်နိုင်ရေး Workshop ကို ဒေါက်တာခင်မေအောင်(ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်)နှင် ဒေါက်တာချိုချိုမြင့်(ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်)တို့ တက်ရောက်ပြီး အောက်တိုဘာလ၊ ၂၀၁၈တွင် Project တင်သွင်းခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာလ၊ ၂၀၁၈ တွင် Project အမည်‌ရွေးခံရသဖြင့် ထားဝယ်တက္ကသိုလ်ကို Smoke Free University ဖြစ်ရေးအတွက် စီမံချက်အရ ဦးဆောင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။
(၁၃-၆-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်တက္ကသိုလ်ကို Smoke Free University အဖြစ် ကြေညာခြင်း အခမ်းအနားကို တိုင်းအစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် က ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
(၆-၁-၂၀၁၉ မှ ၃၁-၈-၂၀၂၀) ရက်နေ့ထိ Change Management ၏ Employer Enjoyment Project အရ ထားဝယ်ဒေသအတွက် အထူးလိုအပ်သော Tourism Management သင်တန်း၊ ထိုင်းဘာသာစကားပြောသင်တန်း၊ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းများနှင့် ရုံးစာရေးနည်းသင်တန်းများကို အောင်မြင်စွာဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
(၆-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်တက္ကသိုလ်၊ ထားဝယ်နည်းပညာတက္ကသိုလ်၊ ထားဝယ် ပညာရေးကောလိပ် ၊ ထားဝယ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တို့သည် ထားဝယ်တက္ကသိုလ် အစည်းအဝေးခန်းမတွင် MoU လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
(၉-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်တက္ကသိုလ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံကန်ချာနာပူရီရာဂျာဘတ် တက္ကသိုလ်တို့အကြား MoU လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။
(၂၁-၂-၂၀၂၀)ရက်နေ့ ထားဝယ်တက္ကသိုလ်၏ “ကြွေရတုမွေးနေ့” တွင် သုတေသနညီလာခံ ကျင်းပခြင်း ၊ ဘာသာရပ်ပြခန်းများနှင့် ဌာနအလိုက် ဥယျာဉ်အလှဖော်ထုတ်ခြင်းများ၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်၊ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များနှင့်ပူးပေါင်း၍ product show များပြသခြင်း တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
Total views : 64463